(tonga teto avy amin'ny Togo)
Mahatra 550 km ny morontsirak' i Togo, izay avy any avatatra mianatsimo. Ny morontsiraka ao atsimo dia iva dia iva sady misy fasika. Ahitana ala ny any avaratra. Mafana sy mando ny toetany any. Be tentombohitra ny ao afovoan' i Tôgô, izay manana tampona any amin' ny haambo 986 m. Ny any avaratra kosa dia rakotra hivoka anirian-kazo sy manana toetany maina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tôgô&oldid=1040832"